Ukuze wenze iholide liphumelele, kubalulekile ukukhetha izesekeli ezifanele zeqembu le-bachelorette. Yini okumelwe icatshangelwe?
Amaqembu best hen best
Iqembu lezinkukhu ngumcimbi omnandi osiza umakoti ukuba aphumule kancane futhi aziphazamise umshado wangaphambi komshado. Phakathi naleli holide, ungachitha isikhathi nabangani bakho abakhulu, ujabule futhi ukhohlwe ngalokho okuhlangenwe nakho okuhlobene nomshado ozayo. Ukuze konke kuphumelele, kubalulekile ukukhetha izesekeli ezifanele kwiqembu lakho le-bachelorette. Futhi ungakwazi kokubili ukuhlela kusihlwa, futhi uwasebenzise njengemihlobiso eyengeziwe eyenzelwe ukujabulisa izivakashi.
Uma kwenzeka kucatshangelwa isimo, izesekeli kufanele zihambisane ncamashi nesiqondiso sakusihlwa. Ngakho-ke, uma unquma ukuba neqembu le- pajama, thola izigqoke ezithambile ezanele nezindondo, thola ama-albhamu ngezithombe, khetha amafilimu afanelekile. Kubalulekile ukuthi izibuko nazo zikhululekile futhi zihambisana nenhloko yeqembu. Ngaphezu kwalokho, uma unquma ukuba neshado lomshado ekhaya, tshela abangani bakho ukuthi bathathe izingubo ezikhululekile nabo - ama-leggings, ama-pajamas akhanyayo noma ama- night shirts abanezinhlamvu ezahlukene ezihlekisayo. Iphepha lemibala yemilayezo ekhanyayo izophinde ihlanganise neqembu. Thola umqhele wamaplastiki amaningi kumakoti nezinye izesekeli ezifanele ezithombeni ze-bachelorette. Isibonelo, izintombi ungathenga amagagasi omlingo, kanye namaphiko amanga.
Kuhle ukuhlela ebusuku kusimo somkhosi we-Oscar. Izesekeli zeqembu le-bachelorette zizoba: ikhethini, isiteji esithuthukisiwe, imidwebo, izimvilophu. Amantombazane kufanele agqoke izingubo ezinhle. Ngemuva kokuthi "umkhosi wokudiliva" udinga ukuguqula zibe izingubo ezilula futhi ubambe "ngemuva kokunakekelwa." Ungalawula ama-T-shirts, lapho okunikezwa khona "iziqu" kuzophindwa kabili.
Etafuleni kungcono ukunikeza okuthandayo ukukhanya okulula nokuphuza utshwala obuthakathaka. Ku-rack ekhethekile, beka ikhamera.
I-party engekho yezibalo zezinkukhu
Uma unquma ukungena ne-entourage ekhethekile kanye nenhloko yeholidi lakho, thenga izesekeli zakudala. Isibonelo, thola izigqoko zezinhliziyo, amabhaluni agcwele i-helium, imithwalo emihle namasethi amancane. Kuyinto efiselekayo ukuthi itafula linikezwa futhi lihlotshiswe ngesitayela esihlanganisiwe. Sebenzisa i-cookware efanayo namakhandlela amahle namaphongipi.
Kumele kuqashelwe ukuthi amakhandlela afaneleka kuzo zonke izimo. Bayosiza ukuwenza umkhathi ube nemikhosi ejulile futhi eqotho. Into esemqoka ukuwahlobisa kahle. Amakhandlela angafakwa emakhandeni enhle kakhulu, kokubili aphansi futhi aphakeme, noma afakwe emanzini phakathi kwe-confetti enobumnandi ne-rose petals.
Kubalulekile futhi ukunakekelwa okuhle okuhambisana nomculo weholide. Khetha izingoma ozithandayo, kusengaphambili. Zama futhi ukucabangela ukuthanda kwezintombi. Ukwenza iqembu lefombazane lijabulise nakakhulu, lungiselela imincintiswano noma imidlalo yetafula. Kuyinto efiselekayo ukuthi abawinile kufanele bathole imiklomelo engokomfanekiso. Ungase futhi udlale "umklomelo omkhulu" ngemva kokuhlwa.
Ososayensi - ukukhanya nokungazi - ebumnyameni! Ngubani wathi ukufunda unesicefe?
Gianni Rodari tale "Journey a Umcibisholo oluhlaza": isifinyezo ngiswa abasemqoka abazizwa, ukubuyekezwa